Gobolka Tigray ee Itoobiya oo ay ka socoto doorasho ka madaxbanaan dowladda Itoobiya - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeWararkaGobolka Tigray ee Itoobiya oo ay ka socoto doorasho ka madaxbanaan dowladda Itoobiya
Shacabka ku dhaqan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa u dareeray codbixinta doorashooyinka qaranka ee xubnaha Baarlamaanka gobolkaasi taas oo ka madax banana isla markaana aan lala socodsiin dowladda dhexe ee Itoobiya.
Maamulka Tigray ayaa dooranaya ilaa 190 xubnood oo ka mid noqonaysa baarlamaanka gobolka Tigray wuxuuna maamulkaasi dhegaha ka furaystay digniino uga imaanaya Addis Ababa.
Waxaa lagu wadaa in dad lagu qiyaasay 2.7 malyan ay codadkooda ka dhiiban doonaa ilaa 2,600 oo goobood oo ay ka dhecayso cod bixintu.
Ismaamulka tigreey ayaa diiday in dib loo dhigo doorashooyinka qaranka ee maamulkaasi. Aqalka sare ee Baarlamaanka Itoobiya ayaa doorashooyinkaasi ku tilmaamay kuwo aan sharci ahayn waxayna u muuqataa in ay arrintaani horseedi doonto gacan ka hadal dhex mara xukuumadda dhexe ee Itoobiya iyo gobolka Tigray.
Dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa hore cagta u marisay maamulkii Cabdi Ileey kadib markii uu sameeyey amar diido waxaas la ogsoon yahay in maamulka Tigray uu haysto hub iyo ciidan aad u farabadan si ka duwan maamulka Soomaalida ee Itoobiya waxaana adkaanaysa in ay dowladda Dhexe ee Itoobiya ayaad si degdeg ah awood ugu maquuniso maamulkaasi Tigray.
Qowmiyadda Tigray ayaa muddo dheer gacanta ku haysay awoodda talada Itoobiya taasina waa tan u suura gelisay inuu gobolka Tigray aad u hubaysnaado.